Waa maxay isbuuca Almedalen? | Somaliska
Isbuucaan waxaa magaalada Visby ee gobolka Gotland ka socda bandhig siyaasadeedka caanka ah ee loo yaqaan Almedalen. bandhigyada ayaa la qabtaa inta u dhaxaysa Juli 1-8 ee sanadkasta. Hadaba waa maxay Almedalsveckan? Almedalen ayaa ka soo bilaabatay sanadkii 1968 ka dib markii uu raysal wasaarihii sweden Olof Palme ee ka tirsanaa xisbiga Social Demokraterna uu halkaasi ka soo jeediyay qudbad lama ilaabaan ah. Isbuuca Almedalen ayaa hada ah mid ay wada xaadiraan guud ahaan siyaasiyiinta Sweden, kuwa baarlamaanka iyo kuwa degmooyinka. Waxaa la dhihi karaa waa xajka siyaasiyiinta Sweden. Isbuucaan ayaa maalinkasta waxaa leh hal xisbi oo soo bandhigaya siyaasadooda iyagoo qabta seminaaro looga hadlayo sida ay wax uga badalayaan arimaha siyaasada. Shalay oo axad ahayd ayaa waxaa bilaabay xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) iyagoo hal abuur ka dhigtay "Cidna laga tagi maayo" arintaas oo ay ku qosleen siyaasiyiinta kale, maadaama xisbigaan uu naceyb u hayo soo galootiga. Siyaasiinta ka qeyb gala isbuuca Almedalen ayaa maalmaha uu socdo bandhigaas waxay sameeyaan xiriiro. Goobtaas ayaa ah goob muhiim u ah qofka doonaya ama ku jira arimaha siyaasada Sweden. Xisbiga Miljöpartiet (MP) ayaa maanta iyagu sameynaya bandhigyadooda, iyadoo la filayo in ay soo bandhigaan xiriirka kala dhexeeya xulufada dowlada. Xisbiga ayaa dowlada ku taageeray arimaha socdaalka iyo soo galootiga, iyagoo qeyb ka ahaa olalihii loogu doodayay mideynta reeraha soomaalida.
Isbuucaan ayaa maalinkasta waxaa leh hal xisbi oo soo bandhigaya siyaasadooda iyagoo qabta seminaaro looga hadlayo sida ay wax uga badalayaan arimaha siyaasada. Shalay oo axad ahayd ayaa waxaa bilaabay xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) iyagoo hal abuur ka dhigtay “Cidna laga tagi maayo” arintaas oo ay ku qosleen siyaasiyiinta kale, maadaama xisbigaan uu naceyb u hayo soo galootiga.
Xisbiga Miljöpartiet (MP) ayaa maanta iyagu sameynaya bandhigyadooda, iyadoo la filayo in ay soo bandhigaan xiriirka kala dhexeeya xulufada dowlada. Xisbiga ayaa dowlada ku taageeray arimaha socdaalka iyo soo galootiga, iyagoo qeyb ka ahaa olalihii loogu doodayay mideynta reeraha soomaalida.
Asc jimcale sxb malaga yawa iney kaso baxdo wax natija galinayo somalida mise lagama yawo
natiijadaada xaan dhahaa wadankaaga somalia u noqonmeeysid miyaa areey
abgaal girl kulahaa magac ku foolxumaa